Onu ahia SNCB ụgbọ oloko na ego ahia | Save A Train
Home > Onu ahia SNCB ụgbọ oloko na ego ahia
Number 1: Dezie tiketi SNCB gị tupu oge ị nwere ike
Number 2: Njem SNCB na-eme njem n'oge oge kachasị elu
Number 3: Nye tiketi gị maka SNCB mgbe ị ji n'aka usoro njem gị
Cgbọ oloko SNCB na-achọsi ike, na obere asọmpi, ha ugbu a-anọgide n'elu nhọrọ maka ụgbọ oloko na Belgium. SNCB nwere ike ịtọ ntọala mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke gbochiri mgbanwe tiketi ma ọ bụ nkwụghachi belụsọ ma ọ bụ ụdị azụmaahịa azụmahịa. Ọ bụ ezie na a ka nwere ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike ire ndị mmadụ tiketi gị, SNCB anaghị ekwe ka ire ere tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye iwu tiketi gị naanị mgbe ị ji n'aka na usoro oge ị ga --echebe gị ịmebe otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara na ịnweghị ike iji tiketi mbụ..
Number 4: Zụta gị SNCB tiketi na Save A Train
Chekwaa Tragbọ oloko nwere nke kasịnụ, nke kacha mma, na nkwekọrịta dị ọnụ ala maka tiketi ụgbọ oloko na Europe. Mmekọrịta anyị na ọtụtụ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè, isi mmalite ụgbọ oloko, na ihe ọmụma anyị banyere teknụzụ algorithms na-enye Save A Train ohere ka ọnụ ahịa ụgbọ oloko dị ọnụ ala. Anyị na-adịghị nnọọ na-enye ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè azụmahịa amụọ maka SNCB naanị; anyị na-enye otu ihe ahụ maka ihe ndị ọzọ na SNCB ma anyị ji ọrụ ndị ahịa kachasị mma na ahịa ụgbọ okporo ígwè na-etu ọnụ.
Tiketi SNCB na-amalite site na ,5 2,5 ruo dị ka as 20 maka otu njem ụgbọ oloko. The ọnụahịa nke tiketi ụgbọ oloko SNCB dabere na ụdị tiketi ịzụrụ na mgbe ịchọrọ ịga njem:
4) Gbọ oloko na-adọrọ mmasị na gburugburu ebe obibi mgbe ị na-atụnyere n’etiti ụgbọ oloko na ụgbọ elu, insgbọ oloko na-apụta n’elu. Gbọ elu ikuku na-emebi ikuku dị elu site na carbon dị elu ha na-enye. Tragbọ oloko na tụnyere enye si ukwuu obere mmetọ carbon karịa ụgbọ elu.
Maka ụmụ amaala Belgium, enwere ụdị ndenye aha dị iche iche, tiketi Unlimited oge, na Ọkọlọtọ Oge. Maka Internationals anyị na-atụ aro ịzụta ogologo oge tupu ị ga - enweta nhọrọ dị ọnụ ala karịa.
Nwere ike ịchọpụta n’oge-dị na peeji nke anyị Save A Train usoro iheomume SNCB, Dị pịnye ebe ị nọ ugbu a na ebe ịchọrọ ịchọrọ, anyị ga-egosi gị ozi ahụ.
eji (Brugge – Otu aha obodo ahụ n’asụsụ ọzọ a ma ama) ụgbọ okporo ígwè bụ ọzọ ụgbọ okporo ígwè SNCB ụgbọ okporo ígwè na Flanders. Ọmụmaatụ, si Bruges, ị nwere ike ịtụ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi ndị ọzọ ewu ewu na ebe na Belgium: Ghent, Antwerp, na Brussels n’ime ihe na-erughị otu awa. The Bruges ụgbọ okporo ígwè bụ na a 20 nkeji’ na-eje ije anya site na etiti obodo, na ebe mara mma Old City Markt.
No. Enweghị Free Wi-Fi ịntanetị na ụgbọ oloko SNCB. Nwere ike ịnụ ụtọ Wi-Fi na ọdụ ụgbọ okporo ígwè SNCB.
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, ugbu a ị maara ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko SNCB gị ma dị njikere ịzụta tiketi ụgbọ oloko SNCB gị Save A Train.